तीव्र स्पंदित प्रकाश （IPL） कपाल हटाउने निस्सन्देह तपाइँको सबैभन्दा राम्रो छनौट हो-प्राविधिक जानकारी-शेन्जेन नोबल स्मार्ट विनिर्माण टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड
गहन पल्स लाइट （आईपीएल） कपाल हटाउने निस्सन्देह तपाईंको सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो
समय: 2019-11-15 हिट्स: 99
यदि तपाइँ कसरी depilate को बारे मा सोच्दै हुनुहुन्छ, र सधैंको लागी कपाल हटाउन असमर्थता को बारे मा चिन्ता, र महंगा depilation उपकरण को बारे मा चिन्ता, कृपया depilation मिसिन मा मेरो लेख पढ्न निश्चित हुनुहोस्।
पनी अनुभवी waxers, shavers, र pluckers को लागी, कपाल हटाउने प्रक्रिया मा थोरै खुशी पाईन्छ। म पक्का छु कि हामी सबै चाहन्छौं कि त्यहाँ स्थायी रूप बाट अवांछित कपाल बाट छुटकारा पाउने एउटा तरीका थियो, आफैंलाई समय र प्रयास बचाउन। Additon मा, यदि त्यहाँ मात्र स्थायी रूप मा घर मा कपाल कम गर्न को लागी एक तरीका थियो!
खैर, त्यहाँ छ
तीव्र स्पंदित प्रकाश （आईपीएल） एक टेक्नोलोजी हो कि एक तरंगदैर्ध्य को ध्यान केन्द्रित प्रकाश को उपयोग गर्दछ, विशेष रूप मा विशिष्ट संरचनाहरु लाई लक्षित गर्न को लागी क्यालिब्रेटेड, जस्तै तपाइँको कपाल follicles। प्रकाश, सार मा, यी कूप निष्क्रिय र फिर्ता बढ्न बाट ती कपाल रोक्छ।
तीव्र स्पंदित प्रकाश "आईपीएल" टेक्नोलोजी २० बर्ष पहिले चिकित्सा समुदाय को लागी यसको परिचय पछि धेरै विकसित भएको छ। अब यी उपकरणहरु धेरै भास्कुलर घाउ, अवांछित कपाल, र pigmented घाउहरु को कस्मेटिक उपचार को लागी सुरक्षित र प्रभावी ढंग बाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। नयाँ टेक्नोलोजीहरु प्राय लेजर उपचार को बराबर परिणाम दिन सक्षम छन्।
केहि उपकरणहरु सैलून मा पहिलो प्रयोग को लागी ती प्रारम्भिक परीक्षणहरु बाट विकसित गरीएको छ, र अब घर मा, त्यसैले तपाइँ आफैं यी स्थायी परिणामहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एक सानो मूल्य को लागी, तपाइँ नोबेल स्मार्ट M3 किन्न सक्नुहुन्छ, जुन मात्र पाँच वा छ उपचार पछि परिणाम देखाउन शुरू हुनेछ, र स्थायी रूप बाट कपाल को बृद्धि लगभग ५४%बाट कम गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ निर्णय गर्नुभएको छ कि तपाइँ प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ, तब दाँत, क्षेत्र मा यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि हल्का दालहरु सबै कूप सम्म पुग्न सक्छ। Waxing वा plucking यो को लागी उपयुक्त छैन यद्यपि, जड त्यहाँ आईपीएल को लागी प्रभावी हुन को लागी हुनु पर्छ।
उपकरण माथि पावर, सबैभन्दा कम सेटिंग मा शुरू (यद्यपि तपाइँ सेटिंग को लागी यो बढाउन सक्नुहुन्छ कि तपाइँको लागी सबै भन्दा राम्रो काम गर्दछ)। त्यसपछि उपकरण माथि क्षेत्र को बिरुद्ध जहाँ तपाइँ कपाल हटाउन चाहानुहुन्छ, र बटन थिच्नुहोस्।
यन्त्र स्वचालित रूप मा तपाइँको छाला को रंग पढ्न को लागी यो उपचार लागू गर्न को लागी सुरक्षित छ, र तब तीव्र प्रकाश को एक पल्स फ्लैश हुनेछ कि कपाल को रोम मा सबै बाटो तल जान्छ।
यन्त्रलाई अर्को क्षेत्रमा सार्नुहोस्, र आवश्यक अनुसार दोहोर्याउनुहोस्।
त्यो जत्तिकै सजिलो!
Little पटक को रूप मा धेरै भन्दा कम तपाइँ स्थायी कपाल घटाउने को लाभ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाइँ यो महसुस गर्नुपर्दैन कि तपाइँको वर्तमान दिनचर्या को लागी कुनै विकल्प छैन, तपाइँको आफ्नै घर को आराम मा स्थायी कपाल कटौती मात्र केहि सत्र टाढा छ!
टेक्नोलोजीले जीवनको सबै पक्षहरु लाई परिवर्तन गरीरहेको छ, जसले हाम्रो डिपिलेट गर्ने तरीका लाई पनि परिवर्तन गरेको छ, आधुनिक टेक्नोलोजी को उपयोग गरी सुरक्षित रूप बाट डिप्लेट गर्न को लागी, मलाई विश्वास छ कि हामी जीवन लाई धेरै भन्दा धेरै रमाउनेछौं। नोबल स्मार्ट दस बर्ष भन्दा बढी को लागी कपाल हटाउने उपकरण को एक पेशेवर निर्माता हो। यदि तपाइँ depilation को बारे मा कुनै प्रश्न छ, तपाइँ हामीलाई परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न पाउँदा खुसी छौं।
अघिल्लो: गर्मीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो?
अर्को: पुरुषहरूको शरीरमा अनावश्यक कपालमा ध्यान दिन एक प्रवृत्ति